September 2020 – Page2– Justnow news
သစ်တုံးတစ်တုံးကိုတွေ့မြင်ရတာချင်းအတူတူပေမယ့်တွေးခေါ်ပုံချင်းက မတူကြဘူး။ ထင်းခွေ သမားက “အိမ်အတွက် တစ်ပတ်စာလောက်ထင်းတွေ လုံလုံလောက်လောက်ရပြီ” လို့တွေး တယ်။ လက်သမားက “အိမ်ဆောက်ဖို့အတွက် သစ်ကောင်းကောင်းတော့ တွေ့ပြီ” လို့တွေး တယ်။ ပန်းပုဆရာက “လှပတဲ့ နတ်သမီးပုံကို ထုဆစ်နိုင်တော့မယ်” လို့တွေးတယ်။ သူတို့တွေ ဘယ်လိုပဲမြင်မြင် သစ်တုံးကတော့ ဘာမှပြန်မပြောပါဘူး။ အသုံးပြုသူရဲ့ လက်ထဲကို အသာတ ကြည် လိုက်သွားမှာပါပဲ။ အထက်ပါ လူ(၃)ဦးလိုပါပဲ… မိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာ တွေ့ကြုံရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အရာမှန်သမျှဟာ ကောင်းသည်လည်းမဟုတ်သလို ဆိုးသည်လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ကောင်း လား/ ဆိုးလား ဆိုတာ မိမိရဲ့ စိတ်နေသဘောထား(attitude) အပေါ်သာ မူတည်ပါတယ်။ ဆိုပါတော့… ပြဿနာတွေ အခက်အခဲတွေ အမှုအခင်းတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရတဲ့အချိန်မှာ “ငါ့ ဘဝက ဆိုးလိုက်တာ” ဆိုပြီး စိတ်ဓါတ်ကျနေမလား? ဒါမှမဟုတ် “လောကမှာ ငါ့ထက်ဆိုး တာ တွေ အများကြီးပဲ”ဆိုပြီး ဖြေသိမ့်မလား? ဘဝမှာ ကံအကြောင်းမလှလို့ လဲကျသွားတဲ့အခါ “ငါ တော့ ဘဝပျက်ပါပြီ”လို့ တွေးနေမယ့်အစား ကိုယ့်ထက်ဆိုးတဲ့ ဘဝတွေကို ငဲ့ကြည့်ပြီး မိမိ ကိုယ် ကို နှစ်သိမ့်ရမှာပါ။ ပျော်ရွှင်ချင်လည်း ကိုယ့်စိတ်ပဲမပျော်ရွှင်ချင်လည်း ကိုယ့်စိတ်ပဲ မဟုတ်လား။…
သက်ရင်းကြီးရွက်များကို ခါးတွင်ကပ်ပြီး အဝတ်ဖြင့်စည်းထားပါ။ (၂)နာရီကြာလျှင်၊ယား လာ လျှင်ဖြည်ပေးပါ။ သက်ရင်းကြီးရွက်(၇)ရွက်ကို အိပ်ယာအောက်တွင်ခင်းအိပ်လျှင် ခါးနာသက် သာသည်ဟုရှေးလူကြီးများသုံးကြသည်။ ကိုရန်ကြီး(ခတ္တာပင်) အရွက်ကိုပျော့အောင်မီးကင်ပါ။ မုံညှင်းဆီ(သို့)နှမ်းဆီသုပ်ပြီး ခါးတွင်ကပ်ပြီးအဝတ်ဖြင့်ပတ်စည်းထားပါ။ ဗာဒံရွက် (ဗန်ဒါရွက်) အစိမ်းရောင်အရွက်နုကိုခါးတွင်၃ရွက်ခန့်ကပ်ပြီး ခါးနာလျှင်ပတ်သည့်ခါးပတ်ဖြင့်ပတ်ထားလျှင် ခါးကြောညပ်၊ခါးဆစ်နာသက်သာစေသည်။သင်္ဘောရွက်ကိုပျော့အောင်ရေနွေးစိမ် ခါးတွင် ကပ် ပြီး ပတ်ထားလျှင် သက်သာစေသည်။ချင်းခြောက် မှုန့်၂ဆ+လင်းနေ မှုန့်၁ဆ+သစ်ကြံပိုးခေါက် မှုန့်၁ဆ ရောစပ် ရေနွေးဖြင့်ကျေညက်အောင်ခေါက်ဖျော်ပြီး ဂွမ်း(သို့)ပတ်တီးစပေါ်တွင်သုပ်လိမ်း ခါးတွင်ကပ်ပြီးအိပ်လျှင် ခါးနာ။ကျီးပေါင်းတက်နာ သက်သာစေနိုင်သည်။ တောရှောက်မြစ်၊ဝံအူမြစ်၊စာသူငယ်ဦးနှောက်၊ပိတောက်သားအနှစ်တို့ကိုသွေးပြီးလိမ်းပေး(သို့)အမှုန့်ကြိတ်ရေဖြင့်ဖျော်လိမ်းပေးပါက ခါးနာသက်သာစေသည်။ မိဿ လင်ဥ(သို့) အမှုန့်ကို ကြပ်ထုပ် လုပ်ပြီး ရေနွေးငွေ့ခံထိုးပေးလျှင် ခါးကိုက်၊လှည့်စောင်းမရဝေဒနာသက်သာစေသည်။ ဆားခါးထုပ်ကိုရေစိမ်ကန်တွင်ထည့်ဖျော်ပြီးစိမ်ပေးလျှင်ခါးနာသက်သာစေသည်။ ဆေးခါး ကြီး (သို့) ရှမ်းဆေးခါးပင်ပြုပ်ရည်ကို အကြမ်းပန်းကန်တစ်လုံးစာ နံနက်ညသောက်လျှင်ခါး နာစွဲနေ သူသက်သာစေသည်။ ဓာတ်စာအနေဖြင့် ခွေးတောက်ရွက်နှင့်ကြက်ရိုးဟင်းချို ချက်သောက် ပါ။ ခါးနာအတွက် ဆေးပရုပ်ဆီချက်နည်း – မင်သော်ဆီ ၂ကျပ်သား။ မီသိုင်း ၃ကျပ်သား။ ပက်ပါမင် ၅ကျပ်သား။ ပရုပ် ၂၄ကျပ်သား။ထင်းရှူးဆီ ၁၀ကျပ်သား။ မုံညှင်းဆီ ၄၀ကျပ်သား။ ပျားဖယောင်း ၁၆ကျပ်သား။( မုံညှင်းဆီအရင်တည်။ ဆူပြီးမှ ဆေးမယ်များအဆင့်ဆင့်ထည့်သွား မီးဖိုပေါ်မှ ချ ပြီး မှ နောက်ဆုံးပျားဖယောင်းထည့်ပါ။ မအေးခဲမီ…
တစ်ခါတုန်းက သစ်ပင်တွေဟာ စကားပြောတတ်တယ်ဆိုပဲ။ စကားပြောတတ်တဲ့ သစ်ပင်တွေ ကို ပန်းပုဆရာတစ်ယောက်က ပန်းပုထုဖို့ ယူလာခဲ့တယ်။ ခုတ်ထားတဲ့ သစ်သား တုံးတွေကို ပန်းပုထုတော့ သစ်သားတုံးတစ်တုံးက အထုခံရ၊ အခုတ်ခံရ၊ အထွင်းခံရ၊ အရိုက်ခံရ၊ အနှက် ခံရတော့ “နာတယ်” ဆိုပြီး အော်တယ်။ဒါကြောင့် ပန်းပုဆရာဟာ အဲ့သစ်သားတုံးကို အသေး စိတ် မွန်းမံမနေတော့ဘဲ တုံးမောင်းအဖြစ်၏နဲ့ပဲ ထားခဲ့လိုက်တော့တယ်။နောက်သစ် သားတုံး တစ်တုံးကျတော့ ဘယ်လောက် နာပေမယ့် သူ မအော်ဘဲ ကြိတ်မှိတ်သည်းခံပြီးတော့ နေခဲ့ လိုက် တယ်။ ပန်းပုဆရာက အဲဒီသစ်တုံးကိုကျတော့ လူသားတွေ အပူဇော်ခံမယ့် နတ်ဘုရားရုပ် တုအဖြစ် ထုခဲ့လိုက်တယ်။လူသားတွေက တုံးမောင်းကို ခေါက်ပြီး နတ်ဘုရားရုပ်တုကို ပူဇော်တဲ့ အခါကျတော့ တုံးမောင်းဖြစ်နေတဲ့ သစ်သားက အသည်းအသည် ငိုကြွေးတယ်။သူတို့ဟာ အစ ပထမတုန်းက သစ်ပင်တွေ အတူတူ ဖြစ်ပါရဲ့နဲ့ ခုကျမှ သူကျ အခေါက်ခံရပြီး ဟိုသစ်သား တုံး ကျတော့ အပူဇော်ခံရတယ် ဆိုပြီး မကျေမနပ်ဖြစ်သွားတယ်။ဒါနဲ့ ပန်းပုဆရာကို ဘက်လိုက် တယ်ဆိုပြီး စွပ်စွဲလိုက်တယ်။ ဒီအချိန်မှာ နတ်ဘုရားရုပ်တုအဖြစ် ထုခံလိုက်ရတဲ့ သစ်သားက သူ့ကို ပြောတယ်။”မင်းကမှ…
(Zawgyi) စကင်ကဲနေရဲ့သားနဲ့ ဘာလို့ ဝက်ခြံထွက်နေသေးလဲဆိုတဲ့အသဲတွေ ဖတ်ကြည့်နော် ================================ သင့်မျက်နှာပေါ်က ၀က်ခြံတွေက သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပြောပြနေတာ သင်သိပါရဲ့လား သင့် နှဖူး၊ နှာခေါင်း၊ပါး၊နားနဲ့ မေးစေ့ဝန်းကျင်တွေမှာ ၀က်ခြံတွေ မကြာခဏပေါက်တတ်ပါသလား။ သင့်နှဖူး အပေါ်ဖက် ဆံစတစ်ဝိုက်မှာ ၀က်ခြံပေါက်ခြင်းဟာ သင့်အစာအိမ်ရဲ့ အစာခြေဖျက်မှုစွမ်းအင်နဲ့ သက်ဆိုင်နေပါတယ်။ ၀က်ခြံပျောက်ကင်းစေဖို့ အစာခြေဖျက်အား ကောင်းစေမဲ့ အစားအသောက်တွေ ဖြစ်တဲ့ ဘယ်ရီသီး၊ သံပရာရည်နဲ့ Green Tea တို့ကို များများစားသောက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ နှဖူး အောက်ပိုင်း မျက်ခုံးနားမှာ ၀က်ခြံပေါက်ခြင်းကတော့ ညအိပ်ရာဝင်ချိန်မမှန်ခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ၀က်ခြံပျောက်ကင်းစေဖို့ နည်းလမ်းကောင်းတွေကတော့ စောစောအိပ်ပါ။ ည၁၁နာရီ မတိုင်ခင်အိပ်ရာဝင်လျှင် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချပါ။ ရုပ်ရှင်ကြည့်ပါ။ တရားထိုင်ပါ။ သို့မဟုတ် ရေကြာကြာချိုးပါ။ နှာခေါင်းမှာ ၀က်ခြံပေါက်ခြင်းကတော့ နှလုံးနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်။ Blood Pressure နှင့် စိတ်ဖိစီးမှုတို့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ နည်းလမ်းကတော့ အတူတူပါပဲ။ စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချပါ။ ရေကြာကြာချိုးပါ။ သီချင်းနားထောင်ပါ။ မိမိနှစ်သက်ရာ အပန်းဖြေနည်းတစ်မျိုးမျိုးဖြင့် အနားယူပါ။ မျက်ခုံးတစ်ဝိုက်မှာ ၀က်ခြံပေါက်ခြင်းကတော့ အဆီပါတဲ့ အစားအစာ စားသောက်မှုများခြင်းကြောင့်နဲ့ အရက်သောက်သုံးခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ ဘာတွေကို လျှော့ရမယ်ဆိုတာ သိလောက်မယ်ထင်ပါတယ်နော်။…
(Zawgyi) သဘာဝကုထုံးများ ============== အအေးမိနေရင် ကြက်သွန်ဖြူစားပါ။ နှာပိတ်တာ၊ခေါင်းအုံတာ သက်သာနိုင်ပါတယ်။ကြက်သွန်ဖြူက သွေးတွင်းကကိုလက်စတရောပမာဏကို လည်း လျော့ကျနိုင်ပါတယ်။ သွေးတွင်းသကြားဓာတ် မြင့်တက်နေရင် မြေပဲနဲ့ အစိမ်းရောင်ပန်းဂေါ်ဖီစားပါ။ဒီအစာ နှစ်မျိုးမှာ ပါဝင်တဲ့ ခရိုမီယမ်က အင်ဆူလင်နဲ့ သွေးတွင်းသကြား ပမာဏ ကို ပုံမှန်ဖြစ်အောင် ထိန်းသိမ်း ပေးပါတယ်။ သွေးကြောပိတ်ဆို့မှု ဖြစ်နေရင် ထောပတ်သီးစားပါ။ သူ့မှာ ပါဝင်တဲ့ မပြည့်ဝဆီတွေက သွေးတွင်း ကိုလက်စတရော ပမာဏကို လျော့ချပေးပါတယ်။ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျောဖြစ်နေရင် ပန်းသီး ဒါမှမဟုတ် ငှက်ပျောသီးစားပါ။ ဒီအစာတွေက ဝမ်းပျက်တာ သက်သာနိုင်ပါတယ်။ သွေးတိုးနေရင် တရုပ်နံနံနဲ့ သံလွင်ဆီ စားပါ။ သံလွင်ဆီက သွေးဖိအား ကျဆင်းနိုင်ပါတယ်။ တရုပ်နံနံမှာ ပါဝင်တဲ့ ဓာတုပစ္စည်း တွေကလည်း သွေးဖိအား ကျဆင်းနိုင်ပါတယ်။ သားမြတ်ကင်ဆာဖြစ်နေရင် ဂေါ်ဖီထုပ်စားပါ။ သူက ကိုယ်တွင်းမှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်မှုရှိတဲ့ အီစတရိုဂျင် ပမာဏ ဖြစ်အောင် ကူညီနိုင်ပါတယ်။ မှတ်ဉာဏ် လျော့ကျနေရင် ငါး၊ ရွှေဖရုံစေ့၊ ဗန်ဒါစေ့၊ သစ်ကြားသီး နဲ့ အနီရောင်အသားလိုမျိုး သွပ်ဓာတ် ပါဝင်မှု များတဲ့ အစားအစာတွေကို စားပါ။သွပ်က မှတ်ဉာဏ်နဲ့ စဉ်းစားတွေးခေါ်မှု အတွက်…
ဆေးစုံနပွေီဆိုတဲ့ ခါးနာတတျသူမြားအတှကျ ဆေးနညျးပေါငျးခြုပျ။ ခါးနာအတှကျ ဆေးနညျးတိုမြား- သကျရငျးကွီးရှကျမြားကို ခါးတှငျကပျပွီး အဝတျဖွငျ့စညျးထားပါ။ (၂)နာရီကွာလြှငျ၊ ယားလာလြှငျ ဖွညျပေးပါ။ -သကျရငျးကွီးရှကျ (၇)ရှကျကို အိပျယာအောကျတှငျ ခငျးအိပျလြှငျ ခါးနာသကျသာသညျဟု ရှေးလူကွီးမြား သုံးကွသညျ။ -ကိုရနျကွီး(ခတ်တာပငျ) အရှကျကို ပြော့အောငျ မီးကငျပါ။ မုံညှငျးဆီ(သို့) နှမျးဆီသုပျပွီး ခါးတှငျကပျပွီး အဝတျဖွငျ့ ပတျစညျးထားပါ။ဗာဒံရှကျ(ဗနျဒါရှကျ) အစိမျးရောငျအရှကျနုကို ခါးတှငျ၃ရှကျခနျ့ ကပျပွီး ခါးနာလြှငျ ပတျသညျ့ခါးပတျဖွငျ့ ပတျထားလြှငျ ခါးကွောညပျ၊ ခါးဆဈနာသကျသာစသေညျ။ -သင်ျဘောရှကျကို ပြော့အောငျ ရနှေေးစိမျ ခါးတှငျကပျပွီး ပတျထားလြှငျ သကျသာစသေညျ။ -ခငျြးခွောကျမှုနျ့ ၂ဆ၊ လငျးနမှေုနျ့ ၁ဆ၊ သဈကွံပိုးခေါကျမှုနျ့ ၁ဆ ရောစပျ။ ရနှေေးဖွငျ့ ကညြေကျအောငျ ခေါကျဖြျောပွီး ဂှမျး(သို့) ပတျတီးစပျေါတှငျ သုပျလိမျး၊ ခါးတှငျကပျပွီး အိပျလြှငျ ခါးနာ၊ ကြီးပေါငျးတကျနာ သကျသာစနေိုငျသညျ။တောရှောကျမွဈ၊ ဝံအူမွဈ၊ စာသူငယျဦးနှောကျ၊ ပိတောကျသားအနှဈတို့ကို သှေးပွီးလိမျးပေး(သို့) အမှုနျ့ကွိတျ၊ ရဖွေငျ့ဖြျောလိမျးပေးပါက ခါးနာသကျသာစသေညျ။-မိဿလငျဥ(သို့) အမှုနျ့ကို ကွပျထုပျလုပျပွီး ရနှေေးငှခေံ့ ထိုးပေးလြှငျ ခါးကိုကျ၊ လှညျ့စောငျးမရ ဝဒေနာ သကျသာစသေညျ။-ဆားခါးထုပျကို ရစေိမျကနျတှငျ ထညျ့ဖြျောပွီး စိမျပေးလြှငျ ခါးနာသကျသာစသေညျ။-ဆေးခါးကွီး(သို့) ရှမျးဆေးခါးပငျပွုပျရညျကို အကွမျးပနျးကနျတဈလုံးစာ…
(Unicode) သငျထငျမထားတဲ့ ငှကျပြောရှကျရဲ့ အကြိုးအာနိသငျ ငှကျပြောရှကျက စားစရာတဈခုမဟုတျသလို ဆေးဖကျဝငျမယျလို့လညျး ဘယျသူမှထငျထားလောကျမှာမဟုတျပါဘူး။ ထုပျပိုးမှုအတှကျ သုံးတာကလှဲလို့ ငှကျပြောရှကျကို စားဖို့ ဒါမှမဟုတျ ဆေးဖကျဝငျတဲ့အရာတဈခုအနနေဲ့ အသုံးပွုလို့ရမယျရယျလို့ ထငျမထားဘူးဟုတျ။ ခြောငျးဆိုးရငျကွပျ- ငှကျပြောရှကျကို လှနျခဲ့တဲ့နှဈပေါငျးမြားစှာကတညျးက ရငျကွပျခြောငျးဆိုးသကျသာစဖေို့အတှကျ အသုံးပွုခဲ့ကွတာပါ။ လလေ့ာမှုတှအေရ ငှကျပြောရှကျဟာ ကိုယျခံအားကိုတိုးစနေိုငျသလို၊ ခငျြေးဆိုးသကျသာစပွေီး နာကငျြရောငျရမျးမှုကို လြော့ပါးစနေိုငျပါတယျ။ အသကျရှုလမျးကွောငျး အထကျပိုငျးမှာရောဂါပိုးတှေ ဝငျရောကျကူးစကျတာကိုလညျး အထိရောကျဆုံး သကျသာစနေိုငျပါတယျ။ အအေးမိဖြားနာတာကိုဖွဈစနေိုငျတဲ့ ဘကျတီးရီးယားတှေ ဗိုငျးရပျဈတှကေို တိုကျဖကျြနိုငျတဲ့ အာနိသငျရှိပါတယျ။ ခြှဲတှကေိုပြျောစနေိုငျပွီး လညျခြောငျး ယားယံခွငျးကို သကျသာစနေိုငျပါတယျ။ ငှကျပြောရှကျကို အရညျညှဈပွီး ရနေဲ့ရောလို့ ၁၀ မိနဈလောကျကြိုပေးပါ။ ပွီးရငျပြားရညျလေးနဲ့ရောပွီး သောကျပေးလို့ရပါတယျ။ လပွှေနျရောငျရမျးနာ- သငျမှာ နာတာရှညျခြောငျးဆိုးကွောငျ့ လပွှေနျရောငျရမျးနာမြားရှိမယျဆိုရငျ သဘာဝဆေးအနနေဲ့ ငှကျပြောရှကျကို အသုံးပွုပေးလို့ရပါတယျ။ ကူးစကျရောဂါပိုးတှကွေောငျ့ဖွဈတဲ့ လပွှေနျရောငျရမျးခွငျးကိုသာမကဘဲ ခြှဲကပျြပွီး ဆိုးတဲ့ခြောငျးကိုပါ သကျသာစနေိုငျပါတယျ။ polysaccharides ဒွပျပေါငျးပါဝငျနတောကွောငျ့ ခြှဲဖွဈပွီး ခြောငျးဆိုးတာကို သကျသာစနေိုငျပါတယျ။ ခြောငျးခွောကျဆိုးတာကို သကျသာစနေိုငျပါတယျ။ ငှကျပြောရှကျကို ရစေငျအောငျဆေးပွီး ရနှေေးထဲမှာ ၁၀ မိနဈကနေ ၁၅ မိနဈလောကျစိမျလို့ ပေါငျးခံရညျယူပါ။ ပွီးရငျစိမျထားတဲ့အရညျကိုသောကျပေးပါ။ တဈနကေို့ ၃ ခှကျလောကျအထိသောကျပေးလို့ရပါတယျ။ အရပွေား…
“အောင်မြင်ချင်ရင် တစ်ခုတည်းကိုပဲ စူးစိုက်လုပ်ပါ” ————— တစ်ခါတုန်းက ကောင်လေးတစ်ယောက်မုန့်ဟင်းခါးကို အထမ်းနဲ့ လိုက်ရောင်းတယ်.. သူက မုန့်ဟင်းခါးကိုကျကျ နနချက်တတ်တော့ သူ့မုန့်ဟင်းခါးက အင်မတန် ရောင်းကောင်းတယ်…စားကောင်းလွန်းအားကြီးတော့သူ့ မုန့်ဟင်းခါးက အစောကြီး ကုန်ကုန်သွားတယ် သူကလည်း မုန့်ဟင်းခါးကိုစေတနာပါပါနဲ့ ချက်တယ် သူ့ မုန့်ဟင်းခါးလည်း နာမည်ရလာတယ်…ဒီလိုနဲ့ တစ်နေ့ ခါတိ်ုင်းထက် စောပြီး တော့ ကို မုန့်ဟင်းခါးက ရောင်းလို့ ကုန်သွားတယ် ဒီတော့ ကောင်လေးလည်းပျင်းပျင်းရှိတာနဲ့သူ့မှာပါလာတဲ့ ဂီတာထိုင်တီး တယ်… ကောင်လေးက ဂီတာထိုင်တီးတာ ဝါသနာပါတယ် ဒါပေမဲ့ ပညာရှင်တစ်ယောက်လို တီးတတ်တာတော့ မဟုတ်ဘူးသို့သော် နားထောင်လို့ ကောင်းရုံတော့ အသင့်အတင့် တော့တီးတတ်တယ်…အဲ့တော့ သူဂီတာထိုင်တီးနေတုန်းမှာဘေးနားက ဖြတ်သွားဖြတ်လာ လူတွေက သတိထားမိပြီး လာနားထောင်ကြတယ်။လက်ခုပ်သြဘာပေးကြတယ် ဟိုသီချင်းလေးတီးပြပါ ဒီသီချင်းလေးတီးပြပါပေါ့ ..သူကလည်း ကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ တီးပြတယ်လူတွေကလည်း ဝိုင်းလို့ နားထောင်ကြတယ် ဒီလိုနဲ့ သူက တစ်နေ့တစ်နေ့ အိမ်ပြန်ရောက်ရင်မုန့်ဟင်းခါးချက်ဖို့ကို စိတ်မပါတော့ဘူး ဂီတာကို ဘယ်သီချင်းတွေ နဲ့တီးရမလဲပဲစဉ်းစားတော့တယ် အဲ့ဒီမှာပဲ စိတ်ကရောက်နေတယ်…မုန့်ဟင်းခါးအိုးကြီးကို ပစ်ထားတယ်ခါတိုင်းလို စိတ်ပါလက်ပါနဲ့ မချက်တော့ဘူး လူတွေလက်ခုပ်သြဘာပေးတဲ့ဂီတာထိုင်တီးတာကိုပဲသာယာပြီး ပျော်မွေ့နေတယ်…အဲ့ဒီမှာ သူ့မုန့်ဟင်းခါး နာမည်ပျက်သွားတယ် အရင်လိုမရောင်းရတော့ဘူး ဂီတာကလည်း ပညာရှင်အဆင့်မဟုတ်ဘူး ဒီအတိုင်း ဝါသနာရှင်အဆင့်…
စတော်ဘယ်ရီသီးစားခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်မည့် အကျိုးကျေးဇူးများ
စတော်ဘယ်ရီသီးစားခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်မည့် အကျိုးကျေးဇူးများ ——————————– စတော်ဘယ်ရီသီးက အရသာရှိပြီး စားလို့ကောင်းရုံတင်မကပါဘူး၊ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။ဗီတာမင် C ၊ ဗီတာမင် K ၊ ဖော်လစ် အက်ဆစ်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်၊ မဂ္ဂနီ၊ ပိုတက်ဆီယမ် စတဲ့ ဓာတ်တွေလည်း အများကြီးပါဝင်နေပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင် စတော်ဘယ်ရီ တစ်ခွက်လုံးစာမှ ၄၉ ကယ်လိုရီဘဲ ပါဝင်တာကြောင့် Diet လုပ်နေသူတွေလည်း စားလို့ရပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာ စတော်ဘယ်ရီ အမျိုးကွဲပေါင်း ၆၀၀ လောက်ပါဝင်ပြီး Antioxidants တွေအများဆုံးပါဝင်တဲ့ အသီးအနှံတွေထဲမှာ ပါဝင်နေပါတယ် ။သွေးတိုးကို ထိန်ုးညှိပေးလျစ်လျူမရှု သင့်တဲ့ သွေးတိုးတဲ့ လက္ခဏာများသွေးတိုးရှိသူတွေ စားပေးသင့်ပါတယ်။ ပုံမှန်စားပေးရင် သွေးတိုးကို ကာကွယ်ပေးပြီး ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး အောက်စီဂျင် ဖြန့်ဝေပေးမှုကို ထိရောက်စေပါတယ်။နှလုံးရောဂါ ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကို လျော့ချပေးအမျှင်ဓာတ်၊ Phytochemicals တွေနဲ့ ဗီတာမင်ဓာတ်တွေပါဝင်မှုများတာကြောင့် သွေးအတွင်း ကိုလက်စထရော တွေကို ထိန်းညှိပေးပြီး နှလုံးကြွက်သားတွေကို သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ အသားအရေကို လှပစေအသားအရေ လှပဖို့ စပျစ်သီးကို စားသုံးကြရအောင်စတော်ဘယ်ရီသီးမှာ Antioxidants မျိုးစုံပါဝင်နေပါတယ်။ ဗီတာမင် စီလည်းပါဝင်တာကြောင့် အသားရေနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို Free Radicals တွေကြောင့် ပျက်စီးမှုကနေ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ အဲ့ဒီအပြင်…
အဖိုးနညျးပမေယျ့ အကြိုးမြားတဲ့ ဆီးဖွူသီးအစှမျးသတ်တိမြား
September 28, 2020 author Comments0Comment
ဆီးဖွူသီးဆိုတာ မွနျမာတှအေတှကျ ဟငျးအရနျအဖွဈ စားနိုငျတဲ့ အသီးတဈမြိုးပါ။ ဆီးဖွူသီးကိုထောငျးစားရငျတော့ ထမငျးမွိနျစမေယျ့ ဟငျးတဈခှကျပါပဲ။ ဆီးဖွူသီးကို သုပျစားကွပါတယျ။ဆီးဖွူသီးသနပျအဖွဈ လုပျစားကွပါတယျ။ အသားနဲ့ရောပွီး ခကျြစားကွသလို ငပိခကျြအဖွဈလညျး ခကျြစားကွပါတယျ။ ဆီးဖွူရဲ့ အရသာဟာ ဖနျ၊ ခါး အရသာ ရှိပါတယျ။ဆီးဖွူသီးဟာ ဗိုကျတာမငျ C အလှနျကွှယျဝတဲ့ သဘာဝ အသီးအနှံ ဖွဈပါတယျ။ အသဲနဲ့ဆိုငျသော ရောဂါဝဒေနာသညျတို့ အဓိက အားထားရာ သဘာဝ ဆေးစှမျးထကျတဲ့အသီး ဖွဈပါတယျ။ ဆီးဖွူသီးဟာ သှေးသားသနျ့စငျမှုက သှေးအတှငျး အဆိပျအတောကျတှနေဲ့၊ ဗိုငျးရပျပိုး၊ ဗကျတီးရီးယားနဲ့ အဏုဇီဝပိုးမှားတှကေိုလညျး ဖယျရှားပေးပါတယျ။ဆီးဖွူသီးသညျ အသကျကို ရှညျစေ၏။ ခြောငျးဆိုး၊ ပနျးနား၊ လနောတို့ ကို ပြောကျကငျးစေ၏။သှေးဝမျးသှားလြှငျ ဆီးဖွူသီး အစိမျးကို ထောငျး၍ အရညျညှဈယူပွီး သံပရာရညျနှငျ့ သောကျလြှငျခကျြခငျြး သကျသာ ပြောကျကငျး၏။ ဆီးဖွူသီး အခွောကျ (သို့) အစိုကို သှေး၍ သံပရာရညျအနညျးငယျ ထညျ့ပွီး အရပွေားပျေါတှငျ ဖွဈတကျသော ယားနာ၊ ပှေး၊ ညှငျး၊ တငျးတိပျမြားကို လိမျးပေးနိုငျ၏။ ကိုယျခန်ဓာ၏ ခုခံအားကို မွငျ့တကျစေ၏။ဆီးဖွူသီး အခွောကျမှုနျ့ကို ထနျးလကျြ၊ ပြားရညျ၊ သကာရညျတို့နှငျ့ နယျစားပါက ဆီးပုပျရောဂါပြောကျ၏။…